CrowdSPRING ebipụtala ihe omuma a na agwa obere oru mgbasa ozi. Mgbe mbụ m hụrụ stats na ojiji, ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu na etu stats si dị ala bụ obere azụmaahịa. Lelee anya miri emi ma echere m na ọ bụghị ihe ijuanya. Ọ dị oke mkpa iji nwee obere azụmaahịa na-aga nke ọma ka ịkwado mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ịbụ ihe ịma aka.
Nke ahụ kwuru - ọ bụ ohere dị egwu maka ndị ọzọ na-eme obere azụmahịa. Ọ na-egosi na ọ nweghị asọmpi n’ebe ahụ! Bido blọgụ ma nwee ahịa gị. Soro na mgbasa ozi mmekọrịta ma wulite ndị na-ege gị ntị. Ọ gaghị agbanwe azụmahịa gị n’abalị, mana ọ bụ itinye ego ga-akwụ ụgwọ. Ọ nwere ike were izu, ọ nwere ike were ọnwa… mana ịkwesịrị itinye aka. Ọ bụrụ n’emeghị, ndị asọmpi gị ga-eme ya.